Postlọ ọrụ ntụgharị Compost | Ndị na-emepụta ihe na China, ndị na-eweta ngwaahịa
Forklift ụdị composting akụrụngwa bụ ihe nchekwa ume ọhụrụ na ngwa dị mkpa maka mmepụta nke fatịlaịza na ngwongwo. Ọ nwere uru dị elu nke na-akụpịa arụmọrụ, ọbụlagodi ịgwakọta, nchịkọta zuru oke na ogologo oge na-agagharị, wdg.
Na Hydraulic Organic Waste Composting Turner igwe eji maka gbaa ụka nke ahihia ahihia dika anu ulo na ulo ozuzu okuko, ahihia ahihia, ahihia ahihia ahihia, nri achicha na ahihia ahihia. Akụrụngwa a na - ewepụta ụdị ụdị ahịhịa na - aga n'ihu na - aga n'ihu, mere ka mkpofu ahịhịa ngwa ngwa, gbanyụọ mmiri, deodorized, ghọta ebumnuche nke enweghị mmerụ ahụ, imegharị ihe mkpofu na mbenata nhazi, obere ume ike na ogo ngwaahịa.
Wheel Type Composting Turner Machine bụ akpaka composting na gbaa ụka akụrụngwa na ogologo na-adịru na ogbu nke anụ ụlọ nri, sludge na ahihia, apịtị filtration, usụhọde slag achịcha na ahịhịa sawdust na sugar mills, na-ejikwa ọtụtụ ebe gbaa ụka na akpịrị ịkpọ nkụ na organic fatịlaịza osisi, compound fatịlaịza osisi , sludge na ahihia ulo oru ubi, ubi ugbo na osisi bismuth.
Na Ugboro abụọ ịghasa Composting Turner a na-eji gbaa ụka nke nsị anụ, sludge ahịhịa, apịtị nzacha, dregs, ọgwụ fọdụrụ, ahịhịa, sawdust na ihe mkpofu ndị ọzọ, ma bụrụ nke a na-eji eme ihe.
Crawler Ihe Organic Waste Compost Turner bụ ọkachamara igwe n'ihi na nri fatịlaịza na ndị ọzọ organic ihe gbaa ụka. Ọ na - akwado sistemụ arụmọrụ dị elu, na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ crawler.
Na Chain efere Composting Turner Machine nwere uru nke elu arụmọrụ, edo inggwakọta, juputara mbịne na ogologo na-akpụ akpụ anya, wdg O nwere ike ịbụ dakọtara na oghere-nnofega ngwaọrụ ịghọta multi-oghere mbịne.